सार्वजनिक यातायात द्वारा यात्रा योजनाहरू
मेट्रो होटल ट्यूमु
होटल मस्कु मस्को
"विकासकर्ताले परियोजना दस्तावस्तुको आवश्यकताहरूसँग निर्माण गरिएको वस्तुको अनुपालनमा अपरिचित निष्कर्ष जारी गरे। कागजातहरूले कमिसिंग अनुमति दर्ताका लागि तयारी गर्दैछ, "ओलेत्नो क्रियानिकोले बुझाउँछ।
1 15-फालिज स्ट्राइकको क्षेत्र .6..6 हजार वर्ग मिटर हो। मिटर होटल र अफिस भागहरूमा प्रवेश केन्द्रहरू मुख्य र आँगन फराकबाट अवस्थित छन् (उत्तरी र दक्षिणतिर भवनको दक्षिणी भागबाट)।
पहिलो फ्लोरमा अफिसहरू छन्। परिसर मध्ये एक होटलको सेवा, रिसेप्शन क्षेत्र र दर्ता क्षेत्र, सुरक्षाको पद, सूचना डेस्क, मनोरन्जन कोठा, एक भण्डारण कोठा, एक भण्डारण कोठा र कम लागत आगन्तुकहरूको लागि। तेस्रो र अन्य फ्लोरहरूमा 300 अपार्टमेन्टहरू छन्।
दुई-स्टोर भूमिगत पार्किंग 36 36 कारहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। पार्किंग स्थलमा प्रवेश उत्तरपूर्वीबाट आयोजित गरिएको छ।
<< p> "सम्पूर्ण निर्माण अवधिका लागि, सुविधामा 1 over निरीक्षण चेकहरू आयोजना गरिएको छ। सबै चरणहरूमा विशेषज्ञहरू उनीहरूसँग आकर्षित भए जसले आवश्यक प्रयोगशाला र वैधानिक अनुसन्धान प्रदर्शन गरे। एन्टी-महामारीको आवश्यकता अनुसार अनुपालन गर्दै नियन्त्रण, "एन्टेनेटाले भने।
- मस्को शहरका शहरका बजेट "काँसालीको बजेट संवैधानिक संस्था, अनुसन्धान र परीक्षणमा निर्माणमा। यो मस्को नोभेम्बर 49 898 RP को सरकारको आदेश अनुसार बनाइएको थियो।
संस्थाहरू विशेषताहरू, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणहरू, साथै मस्कोमा ठूला सुविधाहरूको निर्माण र पुनर्निर्माणमा उल्ल .्घन र पुनर्निर्माणको लागि मान्यता प्राप्त गर्ने र रोक्नका लागि विशेषज्ञता मनाउँछन्।
<< p> साथै, सीआईईले ठूला निर्माण सुविधाको ऊर्जा दक्षता पनि सञ्चालन गर्ने सुविधाहरू निर्धारण गर्ने सुविधा लगायतका सुविधाहरू पनि सञ्चालन गर्ने सुविधाहरू सुविधाजनक परिक्षण गर्ने सुविधाको सामना गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्।
के पूंजी प्रदर्शनहरू क्षेत्रीय प्रोफाइल भन्दा फरक छ जुन एक महत्त्वपूर्ण मापन गर्दछ जुन सँधै अन्य क्षेत्रबाट पाहुनाहरूलाई आकर्षित गर्दछ। विभिन्न उद्योगका विशेषज्ञहरू फोम र कन्स्रेसको भ्रमण गर्न खोज्छन्, प्राय: मस्कोमा प्राय: सञ्चालन गर्दछन्। यो एकदम स्वाभाविक हो कि अर्को घटनाको हव्वामा, होटेल आरक्षण केही कठिनाइहरूसँग सम्बन्धित छ।
<< p> होईन, पाठ्यक्रम, होटेल फेला पार्न सकिन्छ। रूसी राजधानी, धेरै आंकटा विकल्पहरू, र हटेलको भागले धेरै किफायती मूल्यहरू प्रस्ताव गर्दछ। यद्यपि, सामान्य पर्यटकको विपरीत, जुन कहीं पनि हतार नगरिएको छ, व्यापारको रूपमा, व्यापार व्यक्तिले आफ्नो समयलाई अन्य मापदण्डबाट आफ्नो समय अनुमान गर्दछ। मस्कोमा, प्रदर्शनी वा कांग्रेसको सहभागिताले धेरै दिनसम्म आउँदछ, जुन मध्ये प्रत्येक शाब्दिक रूपमा मिनेटमा चित्रित छ।
यस होटलमा सब भन्दा राम्रो आवासको विकल्प प्रदर्शनी जटिलबाट टाढा छैन। आउँदै घटना, सहभागितामा तपाईं लिनको लागि चाहानुहुन्छ, "एक्सपोरेन्सरियस" मा पास हुनेछ? होटल सुन्तला घर एक व्यापार व्यक्ति को लागी एक प्रभावकारी समाधान, एक मात्र समय छैन, तर यात्रा को बजेट पनि!
सुन्तला हाउस होटेलको छेउछाउ टुन मेट्रो स्टेशनको छेउमा अवस्थित छ। तपाईले तीनवटा स्टपहरू मात्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। मस्कोको सबैभन्दा गम्भीर समस्याहरूको सन्दर्भमा - सडक ट्राफिक यातायात जाम, सबवे व्यवसायमा आन्दोलन लामो समयदेखि प्रशस्त छैन। हाम्रो होटेलको पाहुनाहरू "एक्सपोन्ट्रेन्स" मा पुग्न सक्षम हुनेछन् जुन राजधानीको बाहिरी भागमा अवस्थित छन्।
<< p> आधुनिक संसारमा, जब इन्टरनेट मोबाइल फोनको प्रत्येक मालिकको लागि उपलब्ध हुन्छ, यसले श्रम मूल्यहरू तुलना गर्दैन। हामी वचनलाई बोलाउँदैनौं, केवल अन्य महानगरीय होटेलको तुलनामा हाम्रा सुझावहरूको कदर गर्दछौं। यो सत्य हो, प्रति डिम डपको दरमा सब भन्दा सानो अंक देखियो, प्रस्ताव गरिएको सेवाहरूको सूचीलाई दबाउन नबिर्सनुहोस्।
तथ्या .्कहरू शो, प्राय: साना होटेलका मालिकहरू अधिकतम मूल्य कटौतीका कारण एक प्रतिस्पर्धी संघर्षमा जित्ने प्रयास गर्दैछन्, तर उनीहरूको नाफा कम गर्न पनि बाँकी छ। अन्ततः, ग्राहकले राजधानीमा वास्तवमै सस्तो आयात विकल्प प्राप्त गर्दछ, तर कुनै कुराकानी यस अवस्थामा जान सक्दैन।
लागत कटौती व्यक्तिगत सेवाहरूको अपवादको कारणको कारण यो होइन कि अतिथिहरू र सूतीहरूको संख्या वा प्रतिस्थापन अनियमित सफाईको कारण अतिथिहरू असुविधा हुन्छन्। सुन्तलालय घर प्रशासन कडाईका साथ अन्तर्राष्ट्रिय होटल मापदण्डको पालना द्वारा अनुगमन गरिएको छ, आधारभूत सेवाहरू खाताको मूल्यको पूर्ण ध्यानपूर्वक प्रदान गरिन्छ।
सुन्त्रान्त घर मा पाहुनाहरु सम्बन्धित सेवाहरु को एक प्रशस्त प्रणाली को लागी प्रतीक्षा गर्दै छन्। विशेष गरी होटलका पाहुनाहरू रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न सक्छन् जहाँ पेशेवर पकाउहरू केवल एक किसिमको गूंगाको मात्रामा प्रस्ताव गर्न तयार हुन्छन्, तर घटनाको अवसरमा पनि एक भोजलाई व्यवस्थित गर्न तयार हुन्छन्।
<< p> होटलमा त्यहाँ एक सुरक्षा सेवा छ, पाहुनाहरुलाई आरामदायी बिदाको ग्यारेन्टी गर्दछ। होटल आफ्नै पार्किंग लूतले सबै पाहुनाहरूको फाइदा लिन सक्दछ।
फन्डेड सुन्तला ओर्मेड हाउसको लागि अलग कारण, अत्यधिक पेशेवर कर्मचारीहरू। ग्राहकलाई व्यापक सहयोग पुर्याउन, होटल विशेषज्ञहरू बुकिंग सेवामा पहिलो कल पछि लग आउट हुन्छन्। निवासीहरू कहिल्यै योग्य बिना नै रहन्छन्, तर शून्य ध्यान बिना। रिसेप्शन स्टाफ घडीमा प्रश्नको उत्तर दिन र कुनै प्रोफाइल कार्यहरू समाधान गर्न वास्तविक मद्दत प्रदान गर्न तयार छन्।
अर्को सांस्कृतिक पार्क को रूप मा त्यस्ता लोकप्रिय ठाउँहरू छन्। गोरकी, लुन्जकी स्टेडियम र PAVLELTSKAKA मेट्रो स्टेशन। नजिकको एयरपोर्ट Vnukovo अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ - 22. किलोमिटर। यो प्लेसमेन्ट वस्तु कम-लागत युवा यात्राको लागि सल्लाह दिइन्छ।
फ्रासर राजमार्गबाट ​​सबवेबाट बाहिर निस्कनुहोस् (केन्द्रबाट अन्तिम कार), गिलास ढोकाबाट स with ्क्रमणको दायाँ तिर, त्यसपछि दायाँ तिर दायाँ तिर।
ट्रान्जिसनबाट बाहिर आउँदछ, ट्रेराम मार्गहरूमा जानुहोस् र एक ट्राममा 1 16 , 35 वा 47 47 लिनुहोस्। पानी यातायातको एकेडेमी "।
<< P> स्टोर्डबाट स्टोर्डबाट बाहिर निस्कनुहोस् (केन्द्रबाट अन्तिम कार), गिलास ढोकाबाट दायाँबाट। ट्यूम स्टप सेन्टरमा 1 1500 मिटरहरू स्ट्रिप स्टपिंग सेन्टर "मेट्रो टुल्"। एक ट्रेम №16, , 35 वा। 47. स्टप "नोसुडोनियिक मार्गमा ड्राइभिंग"। पानी यातायात को एकेडेमी "।
फोरलेट्स्काया स्क्वायरमा सबवेबाट बाहिर निस्कनुहोस्। 110 मिटर स्टप स्टप "PAVLETSKY स्टेशन" बाट जानुहोस्। ट्राम # 35 35 मा बस्नुहोस् "Novoodanil यात्रा" रोक्न ड्राइभ गर्नुहोस्। पानी यातायात को एकेडेमी "।
म पनी अनुभवको साथ बुकिंग गर्न रोजगार प्रबन्धक लिन्छु। थप फिक्वाक। जिम्मेवारीहरू समावेश गर्नुहोस्: अओ SM, सेटिंग्स, सेटिंग्स, अर्ब र अन्य बुकिंग साइटहरूमा काम गर्नुहोस्, ग्राहकहरूलाई आवाश्यक र बहिर्गमन गर्दछ। ओडेजका लागि सबै सर्तहरू हुन।
सफा आवश्यक छ। एक सानो निजी होटल मा धुने र इस्त्री को लागी मूल श्रमिक दासी। सायद आवास। जूनदेखि अक्टुबरदेखि अक्टुबर।
। बोझिन्: सेवा मामिलाले बीएनभो बुकिंग प्रणालीसँग काम गर्ने होटल र सेवाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने सेवा मामिलाहरू स्वीकृति र सेवाहरू प्रदान गर्ने द्वन्द्वपूर्ण परिस्थितिहरूको परिचालन समाधानको रिपोर्ट गर्ने रिपोर्टहरू पारस्परिक बस्ती हो।